C ụdị elu kpọmkwem zọ pịa TJS-45 - China C ụdị elu kpọmkwem zọ pịa TJS-45 Supplier, Factory -TJS
C-tpye ụba Press
Ugboro abụọ Head Uncoiler
Kpọmkwem ebute ụba
Home » ngwaahịa » C-tpye ụba Press
The mbụ ike pịa nke ọsọ nwere ike iru SPM 1200 na Chile
Ọtụtụ-eji electric njikọta Automatic mmepụta dị ka Mere guzoro, ọnụ, nkenke mobile ekwentị ngwa.
TJS C-tpye tonnage ikike dị iche iche 25 / 35 / 45 / 65 / 80
Pụta Ụwa ka a typical C-eku imewe bụ ọchịchọ maka igwe "uhere" ma ọ bụ kụchapụ ka tonnages na bed nha abawanye. Taijishan ọnwụ eduzi C-eku aghụghọ na-engineered iguzogide nupụsịrị ma ọ bụ "yawning" iji gib-eduzi ebule eme ma ọ bụ nkenke graphite impregnated ọla bushings.
2.Lubrication usoro: pụrụ iche Ọdịdị na akpaka mechiri emechi lubrication, pụrụ iche ulo oru imewe ka ndị isi ozu nweta ọsọsọ na ndị ọzọ eke jụrụ.
3.Equipped na reverse ike ziri ezi na ngwaọrụ na-aghọta elu na-agba ime ihe na ogologo bara uru ndụ nke isi akụkụ.
4.Computer akara usoro: ngosi arụ ọrụ ọnọdụ na nsogbu Top nwụrụ anwụ center akara wepụ kpatara mfe ..
Nka na ụzụ Specificaitons
Ime: 860x450x100mm / 720x450x100mm
Slide ukpụhọde: 30mm
Lubrication usoro: okopodudu lubrication
Auto nkwụsị na kasị elu mgbe: ọkọlọtọ
Mbupu: Worldwide ọrụ
TJS bụ ihe kasị ọkachamara emeputa na Chile na mgbe-sales ọrụ guzobere ọhụrụ Delhi, India, Vietnam etc maka oversea ahịa. Mgbe-sales ọrụ anyị uru ubi na ọtụtụ n'ime ha nọrọ n'ụlọ ọrụ a karịa 5 afọ na ezuru ahụmahụ dị iche iche ọkụ na machnical ajụjụ.
2.We provid mma ị mbupu gị n'ụlọnga
3.We provid ị ngwa ngwa nnyefe
4.We provid ị kacha mma ọrụ
5.We provid ị OEM maka azụmahịa gị
1. Gịnị bụ isi ngwa n'ihi na TJSH-30T?
TJSH-30T na ọtụtụ-eji maka na-amị ezigbo mmiri dị ka eletriki contactor, ọnụ, m / O contactor, shidled cover n'ihi na ekwentị mkpanaaka wdg
2. Gịnị bụ izi ezi nke TJSH-30T?
Single crank C-etiti Akwa-agba Metal zọ Press TJS-80
High Speed ​​wuru n'ụzọ pụrụ Press na Automatic feeder TJS-65T
Ugboro abụọ Point C-eku High Speed ​​Pịa N'ihi na nkenke zọ
H ụba Single-Point High-Speed ​​kpọmkwem punching Press TJSH-30T
Okwu: Foao Industial Mpaghara, Meijingxi Road, Xiniupi Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Company aha: Foao Industial Mpaghara, Meijingxi Road, Xiniupi Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
ìgwè: + 86 13712303213
© Dongguan Taijishan Machinery Equipment Co. Ltd.All Rightes echekwabara